Global Voices teny Malagasy » Mahafeno Ny Fepetra Maha-Mpikambana Ao Amin’ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon’Olombelona Ve i Etiopia? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Novambra 2012 2:43 GMT 1	 · Mpanoratra Endalkachew Chala Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Etiopia, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Etiopia dia isan'ireo firenena Afrikana voafidy ho mpikambana tao amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelona tamin'ny 12 Novambra 2012. Ireo firenena hafa izay voafidy  hiasa mandritra ny telo taona dia i Arzantina, Brezila,Estonia, Côte d’Ivoire, Gabon, Alemana, Ireland, Japana, Kazakhstan, Kenya, Montenegro, Pakistana, ny Repoblikan'i Korea, Sierra Leone, ny Emira Arabo Mitambatra, Etazonia ary Venezoela.
Kanefa, tsy dia tamim-pifaliana loatra no nandraisan'ny maro amin'ny Etiopiana ny fifidianana an'i Etiopia ho ao amin'ny Filankevitry Momba ny Zon'Olombelona. Teo am-panoratana momba ny fahalanian'i Etiopia dia nanoratra  ilay Etiopiana mpanao sariitatra, Abe Tokichaw, amin'ny fiteny Amharic [amh] hoe :
Etiopiana bilaogera sady mpanao gazety, Eskinder Nega, voaheloka hifonja 18 taona an-tranomaizina miaraka aminà mpikatroka mafàna fo 23 hafa tamin'ny 13 Jolay 2012. Sary natolotry ny FreeEskinderNega.com
Lany ho mpikambana ao amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelonai Etiopia. Aoka aloha, Aoka aloha! Etiopia iza? Zon'Olombelona toy inona? Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelona toy inona?
Tsy hita ho mampalahelo ve hoe tsy ifampizaràna amin'ny governemantantsika ny fahatsapana faharesena tsapan'ny Etiopiana rehetra? Raha toa ny governemantantsika mba manana izay fahatsapana tsy fahombiazana Etipoiana izay, mety mba ho nolavin-dry zareo ihany [ilay seza] rehefa nofidiana ho mpikambana ao amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelona ry zareo! Tokony ho niaiky ry zareo fa tsy mendrika ny governemanta Etiopiana ny hipetraka ao amin'ny Filankevitra Momba ny Zon'Olombelona, saingy tsy ananan'ny governemantantsika velively izay fahatsapana ftsy fahalavorariana Etiopiana izay ka dia nanaiky tamin-karavoana ny maha-mpikambana azy ao anatin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelona. Tonga mihitsy aza hatramin'ny fanaovana fanambarana fa tsara n y antontan'isan'ny governemanta Etiopiana raha resaka zon'olombelona!
Zerihun Tesfaye, mpanao gazety any an-tsesitany sady bilaogera, dia namariparitra ny zava-manahirana amin'ilay fahalanian'i Etiopia, bebe kokoa anaty taratasy amin'ny fiteny Amharic  ao amin'ny Facebook:
Avelao aho hihira, tsy vitako, tsy vitako satria adinony ny tolona ilofosako! Hoy ny mpihira iray avy ao an-toerana.
Hitako ho mora kokoa ny manatevin-daharana ity mpihira ity sy mihira miaraka aminy rehefa mitontona amin'ny fanentsenan-tadinin'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy governemanta manoloana ny tolontsika isika! Saingy toa ny mifanohitra main'izay, indraindray ireo fikambanana iraisam-pirenena dia toa mahatsapa tsara miohatra lavitra noho ny Etiopiana ny zavatra iainan'izy ireo aza, mikasika fanitsakitsahana mahatsiravina ny zon'olombelona ao Etiopia ary dia mahazo aina ery isika fa hoe fantatr'ireo fikambanana iraisam-pirenena ny ezaka goavana ataontsika. Indraindray aza isika mihevitra ny firaisa-monina iraisam-pirenena ho toy ny ampahany amin'ny revolisiona andrandraintsika ho an'i Etiopia ary feno firavoravoana ny fontsika! Araka izany, amin'ny alàlan'ny asa fanaovana gazety dia mahazatra antsika ny mitatitra fanitsakitsahana zon'olombelona maro aty Etiopia. Ohatra, raha mitatitra isika mikasika Etiopiana dimampolo tsy manan-tsiny naiditra am-ponja ao amin'ilay fonja malaza antsoina hoe “Kality” dia betsaka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny firaisa-monina iraisampirenena no nanitsy antsika niaraka taminà isa manakaiky kokoa ny marina (120) amin'ireo tsy manan-tsiny voafonja, nampiarahana tamin'ny anaran-dry zareo! Avy eo isika nahatsapa fa hoe eo anilantsika ireny olona ireny ary manatena fa mbola be ny zavatra tsara ho avy atsy ho atsy!
Saingy rehefa nandre ny fahalanian'i Etiopia ho ao amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelona isika omaly halina, ny hira fanevan'ilay mpihira eto an-toerana no mahalaza azy tsara! Moa ve ireny fikambanana ifandraisan'ny governemanta samihafa momba ny zon'olombelona ireny miezaka ny hamotika ny fanantenantsika? Na ve ry zareo mihevitra fa ny governenamanta iray ratsy fomba fanao dia hiova ho tsara sy mendrika rehefa lasa mpikambana ao amin'ny Filankevitra Momba ny Zon'Olombelona? Amin'izao androntsika izao, tsapako ho lasa manana ny marina ara-politika manoloana ny olon-drehetra ny tsirairay! Saingy ny zavatra ratsy indrindra dia ny hoe mbola mila ny fanampian-dry zareo hatrany isika!
Ary mpikirakira aterineto iray feno ahiahy, Yohanes Molla, nanoratra hoe  [amh] :
Misy ohabolana ao an-toerana izay manao hoe: ny kaondrana no mampitondra hena mena ny ampondrany ary mandefa azy irery miaraka amin'amboadia! Araka izany dia hohanin'ilay amboadia ny hena mena ary aoriana kely hivadika any amin'ilay ampondra izy!
Omaly alina aho namaky mikasika ny fahalanian'i Etiopia ho ao anatin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelona sady efa rendremana ihany, noho izany dia noheveriko ho nofy ratsy ilay izy. Kanefa, rehefa nifoha aho io maraina io dia tsy afa-niala tamin'ity tantara ity! Miverina amiko tsy mitsahatra ilay izy ary mahatonga ny androko ho tsy vanombanona! Ka raha izany dia inona no azo hamaritana tsara kokoa ny fahalanian'i Etiopia ho mpikambana ao amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelona miohatra amin'iry ohabolana notanisaiko ery ambony!
Jawar Mohammed nanoratra  fandalinana iray vita antsipirihany momba ny fomba nahazoan'i Etiopia ilay seza tao amin'ny filankevitra. Nefa i Daniel Berehane kosa tsy miombon-kevitra  amin'ireo manohitra ny naha-tafiditra an'i Etiopia ho mpikambana ao amin'ilay filankevitra :
Tsy hitako izay tsy mahamety ny nahalany an'i Etiopia ho ao anatin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelona .
Na Etiopia, na ny Filankevitra dia samy manana lalampanorenana tsara.
Samy manana ny fetran'ny fahaiza-manaony (ara-politika, ara-bola, sns) amin'ny fanatanterahana an'io.
Ady sahala ny lalao.
Ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona dia nanakiana an'i Etiopia ho ny iray amin'ireo tena henjana mpanitsakitsaka zon'olombelona aty Afrika miaraka amin'ny isa ambonin'ireo mpanohitra, mpikatroka mafàna fo sy mpanao gazety mihiboka  any am-ponja.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/11/16/40970/
 izay voafidy: http://www.un.org/en/ga/67/meetings/elections/hrc.shtml
 taratasy amin'ny fiteny Amharic : https://www.facebook.com/zerecon/posts/561944843832518
 nanoratra hoe: https://www.facebook.com/lijalem/posts/281688458618861
 tsy miombon-kevitra: https://www.facebook.com/danielberhane.ethiopia/posts/10151335416279880